Miyaad i siin kartaa bogga internetka ee SEO?
Halkan waa liis kooban oo ku saabsan liiska ama SEO kooban waxaad u baahan doontaa inaad sameyso si aad u hesho muuqaal internetka ee internetka ee SERPs Google. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, ma jiraan wax macluumaad ah oo ku saabsan bogga internetka ee SEO-ga ee ku habboon dhamaantood, laakiin waxaan rajeynayaa in dhibcooyinka soo socda ay kaa caawin doonaan sidaan:
Hubi bogagga shabakadaada waxay ku martigelinayaan oo keliya tayada ugu fiican iyo xogta macluumaadka leh hodanka ah ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah. Xusuusnow, mashiinnada raadinta waxay ku-dul-baxaan qoraalka ku jira bog kasta oo internetka ah oo ku yaala internetka si ugu dambeyntii loo qaato go'aan rikoor. Iyadoo la tixgelinayo in kuwa raadineyaashu ay "akhriyaan" iyo "fahmaan" qoraalka qoraalka kaliya, hubso in kala-soocidda qoraalladaadu ay ku habboon yihiin.
Cilmi-baarista ereyga waa laf-dhabarka astaanta SEO. Waxaa loo baahan yahay in la helo shuruudaha raadinta saxda ah ee ugu habboon mawduucaaga internetka oo inta badan loo isticmaalo dadka dhageystayaasha ah ee bartilmaameedsanaya kuwa raadinaya noolayaasha - wage easy payroll. Iyada oo la tixgelinayo goobaha ugu badan ee dhexdhexaad ah, waxaan ku talineynaa in aan doorto 3 ilaa 5 keywords keywords bartilmaameedka si ay u sameeyaan optimization, iyo sidoo kale keywords keywords iyo jumladaha muhiimka ah. Marka ugu horeysa, waa in aad kuqortaa qoraallada boggaga ah sida socodka dabiiciga ah ee ereyga, halka muhiimka ah ee muhiimka ah bartilmaameedkaaga waa in lagu dhejiyaa si dabiici ah intii suurtagal ah.
Headers and Meta Tags
Waxyaabaha kale ee la sameynayo waa inaad xoogga saartaa ereyada muhiimka ah ee aad u adeegsanayso qaab-u-qaadid. Waxaan u jeedaa halkan waa inaad ka shaqeysiisaa madaxaaga bogga si aad u hubiso inay ku haboon yihiin boggaaga si fiican markaad ku dhex jirto ugu yaraan hal erayga muhiimka ah mid kasta oo si wanaagsan loo muujiyo. Iyada oo la tixgelinayo tagska saxda ah ee saxda ah, waxaan ku talineynaa in lagu daro cinwaanka cinwaanka soo noqnoqda illaa 70 calaamadood, iyo qaamuusyada qeexaya meelaha ku dhow 155 xarfaha (oo ay ku jiraan meelaha). Waxaad xor u tahay inaad halkan ku darto dhowr faallooyin muhiim ah ama keydarrada u baahan dhiirigelinta. Habkaas, iska hubi sharaxaadahaaga maadada oo aaney aad u gaaban islamarkaana is-ilaalin isku mid ah.
Xaqiiqdii, qabashada dhisme ku haboon ee boggaaga ayaa ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee guusha raadinta mashiinka raadinta. In aad haysato dhowr xiriiriye oo ku xiraya boggagaaga qaar ka mid ah boggaga internetka ee caanka ah iyo kuwa isticmaala. Sidaa oo kale, waxaad ku siin doontaa Google iyo sidoo kale inta badan makiinadaha searches sida Yahoo iyo Bing calaamado xoog leh oo boggagaaga boggaga ah ay bixiyaan qiime ka badan kuwa isticmaala ugu dambeyntii, markaa waxay noqoneysaa mid u qalma jagada sare ee SERPs liiska. Si aad u qaadatid faa'iido weyn oo ah dhisitaanka isku-xirnaanta ee miisaankiisa oo buuxa, waxaan soo jeedinayaa isticmaalka isku-xidhka xirmooyinka si loogu daboolo heerka boggaaga caadiga ah. Habkaas, shabakadaada waxay u badantahay inay sare u kacaan, qayb ahaan iyada oo ay sabab u tahay kor u qaadista guusha.
Bogsiinta iyo Diiwaangelinta Tusaha
Ka dib dhamaantayo, waxaan rabaa in aan dhammaystiro koobanaha SEO iyadoo la adeegsanayo bogaga iyo nuqulo. Ugu horreyn, isticmaal bogagga si aad u caawiso raadinta raadinta bots waxay leeyihiin marin wanaagsan oo ku saabsan bogaggaaga si aad u muujiso ujeedooyin, iyo sidoo kale khibrad user wanaagsan. Ugu dambeyntii, ha iloobin inaad soo buuxiso boggaaga internetka oo kuugu soo gudbinaya diiwaanka raadinta, sida Google My Business iyo liisaska kale ee degaanka ama kuwa caanka ah. Isla markaad heshay liistada saxda ah, mashiinnada raadinta ayaa wax badan ka ogaan doona boggagaaga si kor loogu qaado liisaska raadinta internetka.